Mafana indray ny raharaha Kiorda ao Torkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2015 7:09 GMT
Sarin'i Cizre, Torkia avy eny an'habakabaka. Sary Wiki.
Tao anatin'ny tapa-bolana, nametraka an-tery, nanaisotra, ary nametraka an-tery indray ary nesorin'ny manampahefana indray ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ao Cizre, tanàna be mponina Kiorda ao amin'ny sisintany Syriana, akaikin'ny toerana nibodoan'ny vondrona ISIS mahery setra ny faritra ao Afovoany-Atsinanana.
Napetraka ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina mba hiadiana amin'ny hetsiky ny Antokon'ny Mpiasa Kiordistan (PKK) antoko tsy ara-dalàna, izay efa nanambaran'i Ankara fampiatoana ady, saingy nipoitra ho fahavalo tao anatin'ny volana vitsivitsy izay.
Nandritra ny fametrahana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ao an-tanànan'i Cizre, sivily 21 farafahakeliny no namoy ny ainy araka ny tatitry ny Antoko Demokratikan'ny Olona Mpanohana ny Kiorda (HDP).
Napetraka tao amin'ny faritr'i Cizre ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina tamin'ny herinandro lasa izay nahitana sivily 21 maty nisy namono
Milaza ny governemanta fa milisin'ny PKK ireo namoy ny ainy rehetra.
Tamin'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny volana Jona, tafiditra manana anjara toerana ao amin'ny parlemanta ny HDP, nahazo nihoatra ny 13% tamin'ny latsabato ary nanaisotra tamin'ny antokon'ny Rariny sy ny Fampandrosoana (AKP) eo amin'ny fitondrana tsy nahazoany ny maro an'isa sarobidy aminy.
Tsy afaka niantoka fifanarahana iraisana ny antoko sisa tavela ao amin'ny parlemanta, vokatr'izany, hotontosaina amin'ny 1 Novambra ny fifidianana mialoha ny fotoana
Fotoana fohy taorian'ny fifidianana tamin'ny volana Jona, namoizana ain'olona 32 tao an-tanànan'i Suru ny fanafihana nanao vivery ny ainy tamin'ny daroka baomba tamin'ny 20 Jolay, ary ny ankamaroan'ireo lavo dia tanora mpikatroka Kiorda mandamina ny ezaka fanomezana fanampiana ireo olona ao an-tanàna Syriana be mponina Kiorda ao Kobane, izay tanàna tery anelanelan'ny ady ifanaovan'ny milisy ao an-toerana sy ny ISIS.
Niteraka hatezerana sy nanamafy ireo fiampangana fa raha nanao zavatra tsara indrindra dia tsy nandray anjara tamin'ny ady ifanaovana amin'ny ISIS ny AKP, izay noheverina fa ambadik'io fanafihana tao Suruc io.
Sarin'ireo namoy ny ainy tamin'ny fanafihana tao Suruc, sioka avy amin'i @SarkawtShams tamin'ny 22 Jolay.
Taorian'ny daroka baomba, namaly tamin'ny famonoana ireo miaramila Tiorka roa ny PKK.
Ho setrin'izany, nidaroka baomba ireo manda roa ISIS sy PKK tao Iraka ny governemanta Tiorka. Voalohany ny fanafihana ny PKK nanomboka ny faramparan'ny taona 2012, raha napetraka tao an-toerana tamin'izany fotoana izany ny dingana isian'ny filaminana.
Ao Torkia, mbola mitohy hatrany ny disadisa ara-politika, voalaza fa misy ny fanafihana mieli-patrana atao amin'ireo biraon'ny HDP.
Nodorana ireo foiben'ny antoko ao Ankara, tahaka izany ihany koa ireo birao maro hafa manerana ny firenena.
LAHATSARY – Torkia: Mpanao fihetsiketsehana nasionalista mandrava ireo foiben'ny HDP mpanohana ny Kiorda ao Ankara
Na dia eo aza izany, nankany Cizre ny solontenan'ny HDP, miezaka hanao izay ifaranan'ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina.
Indreto ny sary sasany tamin'ny diabe: pic.twitter.com/CXMEL4MYcw
Nandritra izany fotoanan'ny korontana sy ady izany, mpanao gazety maro no nafindra toerana, anisan'izany ilay Holandey mpanao gazety mahaleotena, Frederike Geerdink, noho ny tati-baovao niresahany ny olann'ny Kiorda.